Madaxweynaha Somaliland oo ka hadlay dadkii ay ka soo musaafuriyeen Laascaanood | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweynaha Somaliland oo ka hadlay dadkii ay ka soo musaafuriyeen Laascaanood
Madaxweynaha Somaliland oo ka hadlay dadkii ay ka soo musaafuriyeen Laascaanood
Hargeysa (Halqaran.com) – Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ayaa si kulul uga hadlay dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo ay kasoo musaafuriyeen Magaalada Laascaanood ee Xarunta Gobolla Sool iyo dadka u doodaya.
Mr Biixi ayaa waxaa uu sheegay in dadkaasi Somaliland xamili weysay amni ahaan iyo Dhaqaallo ahaan, balse ay gawaari ku soo qaadeen, iyaga oo si nabad ah ugu wareejiyay Maamulka Puntland si ay u gaaraan deegaannada Koonfur Galbeed oo ay kasoo jeedaan.
Mar uu ka jawaabayay Muuse Biixi eedeyn uga timid dowladda Soomaaliya iyo maamulka Puntland ee ku aadan dadka ay soo musaafuriyeen ayuu sheegay in deegaannada Puntland mar walba lagu dilo dadka kasoo jeeda Koonfur Galbeed, isaga oo tusaale u soo qaatay 17 Ruux oo dhowr Bilood ka hor dil toogasho ah lagu fuliyay Magaalada Gaalkacyo, iyaga oo lagu helay in ay u shaqeeynayeen Ururka Al-Shabaab.
Madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay in Madaxda Dowladda Soomaaliya ay dayaceen Shacabkooda, isla markaana maalin walba dadka lagu xasuuqo magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dalka.
Ugu dambeyn, Muuse Biixi Cabdi, Madaxweynaha Somaliland ayaa hadalkaan waxaa uu Axadda maanta ah ka jeediyay munaasabadda xuska Maalinta ay Somaliland u taqaano Maalinta mujaahdiiinta SNM.